शिक्षा – Paluwa Khabar
काठमाडौं साउन काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् । विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा निस्केपछि आज मंगलबारदेखि सुरु हुने भनिएको विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाहरु स्थगित गरिएको हो । पूर्व कार्यतालिका अनुसार स्नातकका आज १२ गतेदेखि र स्नातकोत्तर तहको भोलि १३ गतेदेखि परीक्षा हुनुपर्ने थियो । सोमबार राति विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबीच सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । तर विद्यार्थीहरुले माग पूरा नहुँदासम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएपछि परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । सोमबार मध्यराति सूचना प्रकाशित गर्दै परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले परीक्षा स्थगित गरिएको
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन?
Posted in राजनीति, शिक्षा
काठमाडौं सरकारले विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै चट् हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसअघि विभिन्न राजनितिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउदै आएपनि त्यो विषय कार्यान्वन हुन सकेको थिएन। सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी ब्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। उक्त विषय सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दलीय राजनीतीकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अवस्था देखि
काठमाडौं आउने साउन दुई गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियत्रण गर्न बनेको विधेयक २०७८ ले डिसीसीएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। शनिबार पनि बैंकहरु खुल्ला भएपछि पनि कर उठाउनकै लागि पनि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ मजबुद् बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोरोनाको संक्रम
काठमाडौं असार असार १० देखी विद्यालय खोल्ने मन्त्रालय आजको निर्णय को खबर विद्यालय सञ्चालन गर्ने मिति तोकियो वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ११ गतेदेखि क्रमिकरुपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ महानगरपालिकाले असार १ गतेदेखि विद्यार्थीको उपस्थितिमै कक्षा ८ देखि १२ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै क्रमिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरपालिकाको तर्क छ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले सबै सामुतथा संस्थागत विद्यालयहरुमा पत्राचार गर्दै असार १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** गत असार १ मा मेलम्ची नदीमा बाढी आउनुको कारण पत्ता लागेको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले वडा नम्बर १
विश्वविद्यालयले स्नातक तह परीक्षाको बाँकी नतिजा पनि यसै साताभित्र प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । स्नातक तहमा मानविकी सङ्कायतर्फ तेस्रो वर्षको नियमिततर्फका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी छ । अन्य सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानका चौथो वर्षका विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित हुन सकेको छैन । त्रिविमा हाल स्नातक तहमा तीनवर्षे र चारवर्षे कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । शिक्षाध्यक्ष भुसालले नतिजा प्रकाशनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । उत्तरपुस्तिका परीक्षण सकिएको र उपत्यका बाहिरबाट उत्तरपुस्तिका आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सकिएकाले अब केही दिनमा नतिजा प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ । बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा पाल टाँगेर भए पनि प्राध्यापकलाई काम पूरा गरिदिन आग्रह गरिएको छ । कोरोना
काठमाडौं जेष्ठ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेललाई कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा परीक्षाका विभिन्न विकल्प सुझाउँदै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको बताएका छन् । अब प्रतिवेदनउपर बोर्डको बैठकमा छलफल गरी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरी निर्णय गरिने जानकारी उनले दिए । कार्यदललाई सरोकारवालाले एसईईको परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्नुपर्ने र कक्षा १२ को भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत भएकोले परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ । खासगरी सङ्क्रमण अवस्थाको आकलन र परीक्षाको मोडालिटीला
काठमाडौं बैशाख पल शाह एक चर्चित मोडल तथा नायक हुन् । उनको जन्म सन् १९८९ सेप्टेम्बर १५ मा दाङमा पल भएको हो । उनकाे न्वारनकाे नाम भने पूर्ण बिक्रम शाह हाे । उनका बुवा स्थानीय राजनीतिज्ञ हुन भने आमाले पसल चलाउनुहुन्थ्यो । उनको एक बहिनी पनि छिन् । बाल्यकाल दाङमानै बिताएका पल शाहले स्थानीय गंगा उच्च माविमा स्कूले जीवन बिताएका थिए । स्कुलको पढाइ सकेपछि उनी उच्च शिक्षा र अबसरको खोजिमा काठमाडौँ आए । त्यसपछि सुरु भयो उनको अभिनय यात्रा । म्युजिक भिडियो- उनको पहिलो भिडीयो ‘तिम्रो यादमा रहन्छु अचेल’ जसले उनलाई चर्चित बनायो । उनले २ भन्दा भन्दा बढी भिडीयो गरिसकेका छन् । उनले फिल्मी क्षेत्रमा ‘नाई नभन्नु ल ४’ बाट डेब्यु गरेका हुन । उनी यस क्षेत्रमा २०१२ देखी हालसम्म कार्यरत छन् । यति मात्र नभई पल सामाजिक सेवामा समेत सक्रिय रहेका छन् । तिम्रो यादमा रुन्छु अचेल बोलको गीतमा अभि
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा विवाहका लागि विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको । हरेक माध्यमबाट मान्छेहरु आफ्नो जीवनसाथि खोज्दैछन् । यो बीचमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा विवाह सम्बन्धी धेरै सुचनाहरु प्रकाशित भएका छन् । सांकेतिक तस्विर स्टुडेण्डसंग डिपेण्डेटमा अष्ट्रेलिया जानचाहनेले ९८६९३४०४७२ मा सम्पर्क गर्नुहोला । २१ वर्षमाथिका विवाहयोग्य बर बधु चाहिएमा स्किम नेपाल कुपण्डोल ०१५५३३२२३, ९८५११८७८९३ मा खबर गर्नुहोला । काठमाडौ निवासी बाह्रमिण एकल महिलालाई नेपालमा नै आर्थिक रुपमा स्थापित स्वजातीय–अन्तर जातीय वर्ष पचासमाथिको जीबनसाथी चाहियो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस
एजेन्सी । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आइतबार मुम्बईमा आ’त्मह’त्या गरेका छन् । सन् १९८६ जनावरी २१ मा पटनामा जन्मिएका सुशान्तले कलाकार बन्नको लागि धेरै संघर्ष गरेका थिए । उनले आफ्नो अभिनयको सुरुवता दिल्ली कलेज अफ इन्जिनेरिङको पढाईपछि थियटरमा आर्टिस्टबाट गरेका थिए । पहिलो कमाई २५० थियो सुशान्तले एक अन्तर्वातामा बताए अनुसार उनी कलाकारितामा प्रवेश गर्नु अगाडी ६ जनासँग सेयर गरेको कोठामा बस्थे । उनले एक प्लेको लागि २५० रुपैयाँ लिन्थे । उनले कुनै समय अभिनेता र अभिनेत्रीको पछाडी गीतमा पनि डान्स गर्ने काम गरेका थिए । सन् २००८ मा पहिलो टिभ शो उनले मुम्बईमा कलाकारिताको लागि धेरै संर्घष गरेपछि सन् २००८ मा बालाजि टेलिफिल्म्सको शो ‘किस देश में है मेरा दिल’ मा काम गरेका थिए । तर उनले आफ्नो करियरको खास सुरुवात सन् २००९ र सन् २०२१ मा आएको टेलिसिरियल ‘पवित्रा रिश्ता’ बाट गरेका थिए । जसबाट उनको नाम
नेपालमा यस्तो पनि गाउँ छ । जहाँ युवतीहरुले केटा नपाउँदा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाएका छैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो खबर गोरखाका विकट गाउँहरुको हो । बिही ६,न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन् । न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्छ । अहिलेसम्म उनको लगन जुरेको छैन ।‘गाउँमा केटा छैनन्, म मात्र होइन हाम्रो गाउँमा थुप्रै केटीको बिहे भएको छैन, कतिको बिहे नभएरै कपाल फुलिसक्यो,’ गुरुङले भनिन् । उत्तरी गोरखाको बिही ६, न्याकमा रहेको करिब ४५ धुरीघरको एकै गाउँमा घरेपिच्छेजस्तो बिहे गर्ने उमेरका तर नभएका युवती छन् । बिहे गर्ने उमेरका युवती धेरै हुने, युवक पढाइ, रोजगारीको सिलसिलामा गाउँ छाडेर जाने भएपछि गाउँका युवतीको बिहे नभएको स्थानीय बताउँछन् । ‘मैले एक कक्षा पनि पढिनँ, घरमा घाँसदाउरा गरेर बसेँ, केही नजान्ने मलाई कसले पो बिहे गर्थ्यो रु’ स्थानीय
८.	यी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए ! (26)